Nahoana No Te Hanongana Ny Governemanta Ny Lehiben’ny Mpanohitra Ao Montenegro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Novambra 2015 20:49 GMT
Nivoaka tamin'ny lohatenim-baovaon'ny haino aman-jery iraisampirenena nandritra ny volana Oktobra i Monténégro, firenena kely ao amoron'ny ranomasina Adriatika, izay tsy mba re nandritra ny tantara nisavoritaka vao haingana tao Balkana.
Tarihin'ny lehiben'ny mpanohitra ara-politika, olom-pirenena an'arivony ao Montenegro no nidina an-dalambe tamin'ny faran'ny herinandron'ny 17 Oktobra 2015 mba haneho ny tsy fahafaham-pony amin'ny governemanta teo amin'ny fitondrana efa ho telopolo taona mahery, herisetran'ny polisy anefa no nifanehatra tamin'izy ireo tamin'izany.
Saingy tsy mahagaga ireo olona ao amin'ny faritra izay miseho toy ny fivadihan-javatra tampoka araka ny fahitan'izao tontolo izao azy.
Fifehezan'i Milo Djukanovic an'i Montenegro
Mitantana ny raharaham-pirenena – amin'ny fomba samihafa – ny Praiminisitra Milo Djukanovic nanomboka tamin'ny taona 1991. Misy ny milaza fa sarintsariny eo amin'ny fitondrana nandritra ny 26 taona i Djukanovic, nanomboka tamin'izy sy ireo mpikambana ao amin'ny Ligy Kominista Momir Bulatović sy Svetozar Marović naka fahefana ary nifehy tanteraka ny andrim-panjakana rehetra tao Montenegro tamin'ny Janoary 1989.
Araka ny tarehimarika sasany, mpitondra tsy mpanjaka nifehy ny fahefana ela indrindra ao Eoropa izy. Praiminisitra i Djukanovic nanomboka tamin'ny taona 1991 hatramin'ny taona 1998, ary filohan'i Montenegro avy eo nanomboka ny taona 1998 ka hatramin'ny 2002, ary lasa praiminisitra indray tamin'ny 2003 hatramin'ny 2006, nanambara izy taorian'izany fa hisotro ronono amin'ny fanaovana politika. Tsy nijanona ela tamin'ny fisotroan-dronono izy fa nisahana ny toerana praiminisitra indray tamin'ny taona 2008, na dia eo aza ny fisalasalana fa tsy nanana ambaindainy amin'ny fanapahan-kevitra ara-politika izy nandritra ny fisotroan-dronono naharitra fotoana fohy.
Mpanao fihetsiketsehana ao Montenegro mihazona afisy maneho ny fitondran'i Djukanović ny firenena efa ho 27 taona – hatramin'ny nanombohany tao amin'ny antoko komonista tao Yogoslavia taloha hatramin'ny fifehezany ny firenena ankehitriny izay antsoin'ny maro hoe “fasista”. Sary tao amin'ny pejy Facebookn'i Sloboda Traži Ljude, nahazoana alalana ny famoahana azy eto indray.
#Montenegro no hany firenena ao Eoropa tsy niova mpitondra mihitsy hatramin'ny nirodanan'ny rindrin'i Berlin
Mpiara-dia amin'i Slobodan Milosevic, ilay “Mpandatsa-dran'i Balkana”, izay nitondra an'i Serbia, ary avy eo i Yogoslavia taloha nandritra ny taompolo 1990 izy, izay mety ho nianjera niaraka tamin'i Milošević aza.
Tafiditra tamin'ny fanamorana asa tsy ara-dalàna toy ny fampidirana zavatra an-tsokosoko, tambajotra mpangalatra fiara manerana an'i Eoropa, famotsiam-bola, fakam-bola amin'ny alalan'ny fihoara-pahefana sy ny maro hafa i Djukanovic sy ireo mpikambana ao amin'ny fitondrana, fiampangana izay lavin'izy ireo. Tamin'ny lahatsoratra vao haingana, mamaritra ny sasany amin'ireo asa voalaza fa maha-voarohirohy an'i Djukanovic sy ny mpiara-miasa aminy toy izao ny gazetiboky Balkanist :
Rehefa mihatra amin'i Montenegro ny sazy henjan'ny ady, ny vahaolan'i Djukanovic hanavotana ny tetibolan'ny firenena dia ny fanamorana ny fidiran'ny tambajotra iraisampirenena mpampiditra sigara an-tsokosoko, izay miara-miasa amin'ny mafia Italiana. Ao anatin'ny asa, nahazo tombotsoa goavana tamin'ny hazany izy sy ny ekipany mpisoloky, manangona an-tapitrisany maro ivelan'ny fireneny.
Mpanohana ny Rosiana? Tsy dia izay loatra
Hatramin'ny nivoahan'ny fihetsiketsehana tao Montenegro tamin'ny vaovaon'ny haino aman-jery iraisampirenena, nilaza ny tsy fahafaham-pon'ny vahoakan'i Montenegro amin'ny fitondram-panjakan'izy ireo sy ny “Serba nasionalista” na ny fihanaky ny “pro-Rosiana” ao anatin'ny fiarahamonina Montenegro ny ankamaroan'ireo fampahalalaham-baovao. Na izany aza, tahaka ny tamin'ny fihetsiketsehana Euromaidan 2014 tao Okraina sy ny fihetsiketsehana madinika ankehitriny manohitra ny governemanta ao Makedonia, lalindalina kokoa ny antony ambadiky ny fihetsiketsehana manohitra ny governemanta ao Montenegro.
Raha tsy mitsaha-mitombo ny harin-karena faoben'ny firenena nandritra ny folo taona farany, ary izy no firenena hany tsy Vondrona Eoropeana nampiditra ny Euro ho vola ofisialiny, ahitana ny iray amin'ireo governemanta mpanao kolikoly indrindra ao Eoropa i Montenegro. Araka ny tahirin'ny Banky Iraisampirenena, mponina maherin'ny 11% ao amin'ny firenena no miaina ambanin'ny fetran'ny fahantrana sy amin'ny ankapobeny, tsy afa-po amin'ny fari-piainana ao amin'ny firenena ny ankamaroan'ny olona.
Tamin'ny 17 Oktobra, notarihin'ny lehiben'ny mpanohitra, nitangorona an-jatony tamim-pilaminanatao afovoan-tanànan'i Podgorica sy tanàna hafa mba hanao fihetsiketsehana ny olona. Nanangana tranonkala sy pejy Facebook ireo mpikarakara mba ampiasaina tsy hiantsoana ny vahoaka hanatevin-daharana ny hetsi-panoherana ihany fa hanomezana vaovao ara-potoana momba ny hetsi-panoherana sy ny loza ateraky ny herisetran'ny polisy mandritra ny fihetsiketsehana ihany koa. Satria matetika iharan'ny teritery ara-politika na tantanin'ny fanjakana ny haino aman-jery ao amin'ny faritra, nanatontosa lahatsary YouTube mandefa mivantana ny fizotry ny fihetsiketsehana ihany koa ireo mpikarakara, hoy izy ireo ao amin'ny tranonkalany: “Aza miantehitra amin'ny vaovao alefan'ny haino aman-jery, jereo ny lahatsary mitatitra ny hetsi-panoherana na araho ny bilaogy mandefa vaovao mivantana”.
Naratra ny mpanao fihetsiketsehana noho ny fifandonana
Tao anatin'ny ora maro, nanao famoretana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro ny filaminana manokana, ka olona maherin'ny 120 no naratra. Nilaza ny fanambarana ofisialin'ny polisy sy ny haino aman-jerim-panjakana fa setrin'ny fanafihan'ny mpanao fihetsiketsehana ireo polisy manamboninahitra no anton'ny fihetsiky ny polisy .
Trano lay napetraka teny amin'ny arabe teo anoloan'ny Lapan'ny Parlemanta ao Podgorica. Sary tao amin'ny pejy Facebook-n'i Sloboda Traži Ljude, nahazoan-dalana.
Nitohy ny fihetsiketsehana, na izany aza, ary nametraka tranolay teny amin'ny arabe manerana ny tranoben'ny parlemanta ao Podgorica ireo mpandray anjara.
Ny alin'ny 24 Oktobra, nanao famoretana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana indray ny polisy, tamin'ity indray mitoraka ity nolazain'ireo nanatri-maso marobe fa nampiasa baomba mandatsa-dranomaso sy herisetra ara-batana tafahoatra ry zareo. Maro ireo mpanao fihetsiketsehana voasambotra, raha naratra kosa ny am-polony.
Fifandonana goavana nitranga tao Montenegro taorian'ny diabe manohitra ny governemanta.
Tratra tamin'ny kamera ny fihetsika tsy mety nataon'ny polisy
Ho fanoherana ny tatitra ofisialy fa ny fampiasan'ny polisy hery dia noho ny fanafihan'ny mpanao fihetsiketsehana ireo manamboninahitra, naka sary ny sasany tamin'ireo “nihantsy” fanafihana tamin'ny polisy ny olona ary nandefa ny lahatsary tao amin'ny YouTube. Mampiseho lehilahy maromaro manao fitafiana tsotsotra sy akanjo misy satroka mivoaka avy ao anatin'ny fiaran'ny polisy mijanona ao amin'ny toby fiantsonan'ny fiara ao afovoan-tanànan'i Podgorica, ary mizotra mankeny amin'ny fihetsiketsehana ity lahatsary manokana ity. Milaza ireo mpikarakara ny fihetsiketsehana fa polisy ireo lehilahy ireo na nokaramain'ny polisy mba hiditra ao anatin'ny fihetsiketsehana ary hitarika herisetra, ka afaka miditra an-tsehatra hanao herisetra mafy kokoa ny polisy.
Azo jerena ao amin'ny fantsona YouTube-n'ny mpikarakara ny lahatsary hafa mitovy amin'izany, miaraka amin'ireo fandraisam-peo nangonina mampiseho ny daroka sy fahasimban'ny fananan'olo-manokana nataon'ny mpitandro ny filaminana.
Lahatsary hafa, izay efa nahazo mpijery maherin'ny 150.000 kosa mampiseho ireo polisy manamboninahitra am-polony mihodidina fiara iray mijanona anaty fitohanana, midaroka ilay fiara, mamoaka ny mpamily hivoaka eo emin'ny arabe ary midaroka sy mandaka azy. Milorad Martinović no anaran'ilay lehilahy, izay voalaza fa filohan'ny fikambanana ady totohondry matihanina ao Montenegro; nampidirina hopitaly tao an-toerana izy noho ny ratra goavana nahazo ny vatany taorian'ny daroka.
Nanapa-kevitra hiverina teny an-dalambe ireo mpanao fihetsiketsehana, na izany aza, ary nitohy ny fihetsiketsehana tamin'ny 31 Oktobra. Araka ny vaovao nozaraina tao amin'ny tambajotra sosialy, nomanina fa hotontosaina tsy ao Podgorica ihany ny fihetsiketsehana fa ao amin'ireo tanàna hafa manerana an'i Montenegro ihany koa. Nitangorona ny mpanao fihetsiketsehana mba hihaino ny lehiben'ny mpanohitra mandray fitenenana tao amin'ny efitrano fanaovana fampisehoana ao Herceg Novi, raha nanohy nanao ny fihetsiketsehana teny an-dalamben'i Podgorica, Herceg Novi sy toeran-kafa kosa ny hafa.
Toa tsy misy tahotra eo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana ao #Podgorica, angamba vao voalohany indrindra tao anatin'ny 25 taonan'ny fitondrana Djukanovic
Olona nitangorona tao Hergec Novi tamin'ny 31 Oktobra mba hanohana ny herinandron'ny fihetsiketsehana tao an-drenivohitr'i Podgorica. Sary tao amin'ny pejy Facebookn'i Sloboda Traži Ljude, nahazoan-dalana.